Tetezamita vaovao : Miverina indray ny fisamborana -
AccueilSongandinaTetezamita vaovao : Miverina indray ny fisamborana
Tao anatin’ ny efa-taona izay dia tsy naharenesana fisamborana mpanao politika teto Madagasikara, na dia nisy aza ireo hetsika fanakorontanana maro. Raha tsiahivina dia tamin’ ny fotoanan’ny Tetezamita, dia nisesisesy ny fisamboarana, ary farany tamin’ izany ny fisamboarana ireo manam-bonihahitra teny amin’ ny Bani Ivato. Indrisy anefa fa miverina indray ny fisamborana mpanao politika, amin’izao fotoana azo lazaina fa Tetezamita kely izao. Nanomboka tamin’ ny fisamboarana an’i Rainidina Liampivoarana sy ireo namany efatra, ary nitohy tamin’ ny fisamboarana an’i Pety Rakotoniaina izany. Taorian’ ireo fisamboarana nisesisesy ireo, dia mbola tsy nisy ny fanazavana ofisialy azo avy amin’ ireo tompon’andraikitra mikasika ny fisamborana. Satria mpanao politika ireo nosamborina ireo, ary voalaza fa noho ny resaka fanohintohinana ny fiainam-pirenena no antony. Rariny loatra raha misy fanazavana omen’ny tompon’andraiki-panjakana ny vahoaka.
Mitohy ary tsy mitsahatra indray izao ny fisamborana ireo mpanao politika, tahaka ny tamin’ ny andron’ ny Tetezamita. Hatreto anefa mbola tsy hita mazava ny hetsika izay notontosain’ireo olona nosamborina ireo, ary tsy hita hoe inona no vesatra raha toa tsy nisy ny hadisoana. Tahaka ny tamin’ ny fisamboarana an-dry Rainidina, dia vao saika hiditra ny efitrano haneho hevitra dia nosamborina. Koa satria ve olon’ny Tetezamita indray no mitondra ny governemanta amin’izao fotoana, dia mitohy io fomba ratsy fisambosamboran’olona tsy amin’ny antony mazava io. Sa ny praiminisitra Ntsay Christian dia mpandray sy mpanatanteraka ny baikon’ny naniraka azy fotsiny ihany. Mipetraka mantsy ny fanontaniana eto hoe, hatramin’ ny volana janoary 2019 hahazoana filoham-pirenena vaovao, dia mety ho firy ny mpanao politika hiditra am-ponja.